चुनाबमा कति खर्च हुन्छ ? - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
चुनाबमा कति खर्च हुन्छ ?
राजनीति फोहोरी हुदा चुनाबी खर्च ह्वात्तै बढेको छ । मनि मसाल हावी भए पछि राजनीति शिद्दांत र बिधान बमोजिम चलेको छैन । पैसावाल ,ब्यापारी ठेकदार गुण्डा डनले टिकट पाएका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालन गर्न उम्मेर्दवारलाइ भनेता पनि ति उम्मेरदवारले टेर पुच्छर लगाएका छैनन । काभ्रे जिल्लामा मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाइ दल र तिनका नेताले जनताको घर दैलोमा पुगेर भोटको बदला नोटको आश्वासन दिएका छन् । चुनाबको पूर्वसन्ध्यामा दलहरुबीच यो सरगर्मी बढेको छ । दलहरुका उम्मेदवारहरु मतदाता फकाउन विभिन्न प्रलोभन र आशाखेती गर्नेक्रम तीव्र छ । जनताको मन जित्नका लागि घरदैलोमा धपेडी गरिरहेका उम्मेदवार तथा तिनको प्रचारप्रसारमा हिँड्नेहरुबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भइरहे पनि निर्वाचन कार्यालयमा उजुरीचाहिँ परेको छैन । तथापि, उम्मेदवारहरुको टुंगो लागेदेखि नै चुनावी आचारसंहिता लागू भएको थियो । सञ्चारमाध्यममा आचारसंहिताविरूद्ध समाचार प्रकाशन÷प्रसारण भए पनि यसमा कुनै पनि दल या गठबन्धन गम्भीर भएको पाइँदैन । चुनावी कार्यक्रमहरुमा एक उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारविरूद्ध आरोप–प्रत्यारोप लगाउने र निजी जीवनमाथि आघात पुग्ने खालका अभिव्यक्ति व्यक्त भइरहेको पाइन्छ । दलहरुले धार्मिक स्थल, विद्यालय तथा सामाजिक स्थलहरुको प्रयोग गरी राजनीतिक सभा गर्दै आइरहेका छन् । प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग भइरहे पनि यसतर्फ कसैको ध्यान केन्द्रित भएको पाइँदैन ।
निर्वाचन आचारसंहितामा दलको निर्वाचन चिन्ह भएको टिसर्ट, टोपी, झोला आदि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, टिसर्ट र ज्याकेट लगाएर हिँड्नेसमेत धेरै भेटिने गरेका छन् । उम्मेदवारहरुका सवारीसाधनमा ठूला झन्डा, माइक तथा लाउड स्पीकर राखेर आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै आएका छन् । बिहान ८ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म मात्र प्रचारप्रसारमा रहनुपर्ने भनिए पनि त्यसको पनि बर्खिलाप भएको छ । प्रचारप्रसारका क्रममा बलियो उपस्थिति देखाउन उम्मेदवार र दलहरुले गाडी र मोटरसाइकलको लस्कर लगाउने गरेको पाइएको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रचार सामग्रीदेखि मतदाता आकर्षित गर्न भोज लगाउने श्रृंखला चल्दै आए पनि कसैको यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको पाइँदैन । चुनाव भनेकै तडकभडक र सक्नेले खर्च गर्ने कुरा हो भन्ने गलत बुझाइ अहिले पनि हावी भइरहेको छ । आफ्नो घोषणापत्र र एजेन्डा मतदातालाई बुझाउनभन्दा अधिकांश शब्द गालीगलौच र आरोप–प्रत्यारोपमै खर्च गर्ने प्रवृत्ति उम्मेदवारहरुमा देखिएको छ ।
अहिले प्रायः मतदाता सचेत छन् । कुन उम्मेदवारले झूटा कुरा गर्यो या कसले पूरा गर्न नसक्ने आश्वासन बाँड्यो भन्ने कुरा मतदाता बुझ्ने भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उम्मेदवारले आफ्ना चुनावी सभाहरुमा मतदातालाई आश्वासनका थुप्रै पोकाहरु बाँडिरहेका छन् । कतिपय स्थानमा मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने किसिमका गतिविधि बढिरहेका छन् । मतदाता प्रभावित पार्ने किसिमका गतिविधि भए÷नभएको सम्बन्धमा निर्वाचन कार्यालयले अनुगमन गरेको छैन । दलहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा उतार्न सकेको देखिएको छैन । निर्वाचन कार्यालयमा आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरी नपरे पनि दलहरुले जिम्मेवारपूर्वक आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा देशभर सुरक्षा चुनौतीसमेत बढिरहेको सन्दर्भमा दलहरुले तडकभडकबिना नै चुनावी गतिविधि गर्नु आवश्यक देखिएको छ । चुनाबमा कस्ले कति खर्च गर्छ यो भन्न सकिने अवस्था छैन जो संग जति छ त्यसले त्यति नै खर्च गर्ने गरेको हामीले देखेका छौ । चुनाबमा खर्च गरेकै कारण कोहि पनि जित्दैन किन भने चुनावमा जनताको मन जित्नु पर्छ ।